Annaga nagu saabsan - Shenzhen Tbit Technology Co., Ltd.
1)Cidda aynu nahay
Waxaan nahay hormuudka bixiyaha xalalka ku saabsan wadaagga dhaqdhaqaaqa/baaskiilada elektaroonigga ah ee casriga ah/baaskiilada kirada ah.
Shenzhen TBIT Technology Co., Ltd waxaa la aasaasay 2007. Waxaa naga go'an in aan macaamiisha caalamiga ah siino software iyo xalalka hardware ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa wadaagga hal-joojin / baaskiil e-baaskiilada / kirada e-baaskiil. Hadda, waxaan u adeegnay ilaa 500 oo shirkadood oo ka badan 20 waddan. Xogta adeegga ee aadka u wanaagsan, waxaan ka helnay aqoonsi sare iyo kalsooni adduunka oo dhan.
2)Maxaan kuu qaban karnaa
Waxaan ku siinaynaa alaabo / madal xirfadaysan oo la isku halayn karo, sida, smart IOT/ GPS tracker / e-bike control box/ dashboard smart meheraddaada oo leh sumad gaar ah, hel dakhli badan.
Ka sokow, waxaan haynaa tignoolajiyada hormuudka ah ee ku saabsan nidaaminta baarkinka, sida xalka baarkinka saxda ah ee leh muraayadaha Bluetooth / RFID / AI kamarada, xalka baarkinka tooska ah iyo meelaynta saxda ah ee saxda ah ee RTK iyo wixii la mid ah.
Waxaan kaa caawin doonaa inaad wax ku biiriso wadaagga gudaha hawlaha ganacsiga dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, kasbashada aqoonsiga waaxyaha deegaanka iyo isticmaalayaasha, iyo inaad gaadho horumar ganacsi oo waara.
Nagu soo biir si aad ugu abuurto meheraddaada fursado aan xadidnayn oo ku saabsan wadaagga dhaqdhaqaaqa/baaskiil elektaroonik ah/baaskiil kiro ah.
Waxaa naga go'an inaan bixinno adeegga dhaqdhaqaaqa
isticmaalayaasha in kastoo qalabkii IOT ee ugu dambeeyay iyo madal xog weyn leh.
Siinta khibrad ka wanaagsan isticmaalayaasha iyo abuurista qaar cusub
adeegga dhaqdhaqaaqa ee isticmaalayaasha .